Kumaa ahaa Don Gato, xayawaanka aaminka ah ee Auronplay | Bisadaha Noti
Encarni Arcoya | | Bisadaha Caanka Ah
Luminta xayawaanka, markii aad la joogtay dhowr maalmood, toddobaadyo, bilo ama sannado, waa xaalad murugo leh oo ka dhigaysa dhammaan kuwa xoolaha jecel inay yaraadaan. Xaaladdan oo kale, marka sheekooyinkaasi ay ku dhacaan fayras, xitaa inbadan. Auronplay wuxuu ku dhawaaqay Abriil 26, 2021 in xayawaankiisii ​​aaminka ahaa, Don Gato, uu u dhintay xanuun.
"Waan murugooday, isla mar ahaantaana waxaan ka buuxay xanaaq iyo xanaaq", waxay ahaayeen ereyadii youtuber-ka uu ku daabacay Twitter-ka oo ku saabsan geeridiisa. Laakiin yuu ahaa Don Gato? Sidee ku wada noolaan jiray Auronplay iyo bisadiisa? Waan kuu sheegi doonaa markaa.
1 Kumaa ahaa Don Gato
2 Sidee ahayd nolosha xayawaanka Auronplay
Kumaa ahaa Don Gato
Don Gato waxay ahayd bisad madow oo leh indho cagaaran. Wuxuu jiray 8 sano wuxuuna ahaa raajada Auronplay. Iyadoo ay weheliyaan Roma, mid kale oo xayawaankiisa ah, waxay ka soo muuqdeen fiidiyowyadiisa qulqulaya waqti ka waqti, ama jidka ayey marayaan, ama xitaa sameynta youtuber-ka.
Marka, kuwa raacsan waxay ogaanayeen sida fanaanadani ula noolayd youtuber-ka, iyo sida labadooduba ugu baashaalayeen gurigooda Andorra.
Don Gato waxay nolosheeda soo gashay Nofeembar 2013. Sawirkiisii ​​ugu horreeyay, ee Instagram, waxaa la daabacay 7-dii Diseembar, 2013, isagoo weli yar. Xaqiiqdii, kamaradaha iyo isaga marwalba si dhow ayey isugu dhawaayeen. Waana inuu isagu sidoo kale la wadaagay muuqaal muuqaal ah oo uu taageerayaashiisa ugu soo bandhigayo xayawaankiisa cusub, oo ah yar yar oo ku dhow ku habboon baabacada gacantiisa, madow, ciyaar badan laakiin aad u dulqaad badan sida uu ugu haysto gacmihiisa.
Weligaa ma weydiisay Auronplay waxa uu sameyn doono haddii Don Gato uu baxsado oo wuxuu ku jawaabay: Aynu rajeyno in taasi aysan waligeed dhicin. Laakiin haddii tani dhacdo waxaan ku dhacayaa niyad jab. Waxaan ooyi lahaa sida 3 bilood. Ma aqaan sida aad u jeclaan karto xayawaan aad u badan.
Sidoo kale, wuxuu sidoo kale la kulmay su'aal kale oo adag: Maxaa dhici kara hadii Don Gato dhinto? «Maalinta bisadaydu dhimato, aniguba waan dhintaa. Kaliya inteena naga mid ah oo rabaayado leh ayaa ogaada xanuunka geerida xayawaanku ay sababi karto.
Sidee ahayd nolosha xayawaanka Auronplay
Don Gato wuxuu ka mid ahaa "saaxiibada" ugu wanaagsan Auroplay. Xaqiiqdii, dad badan ayaa rumeysan taas Waxay bedeshay nolosha youtuber iyo feline-ka wuxuu xiddig ku ahaa inbadan oo fiidiyowyadiisa ah. Xaqiiqdii, YouTube-ka waxaan ka heli karnaa xoogaa fiidiyoow ah oo Auronplay uu la ciyaaray, ama The Adventures of Don Gato, oo ah fiidiyoow kaas oo shakhsiyaadka aan muranka lahayn uu isaga ahaa.
Wuxuu ag degenaa agtiisa, oo ay weheliyaan Roma, oo ah xayawaan kale oo youtuberku haysto weligiisna si wanaagsan ayaa loo daryeelay, isaga oo ah xayawaan wanaagsan oo uu isagu yahay. Waxaad u sheegi lahayd inuu aad u jecel yahay oo uu had iyo jeer garabkiisa yahay, gaar ahaan markuu u baahan yahay.
Dabcan, ereyada Auronplay laftiisa, bisadu waxay baratay inay "iska indhatirto" oo iska indho tirto, laakiin waxaan horeyba u ognahay bisadaha inay ku yiraahdaan wax ka badan ereyada iyo fiidiyowyada waxaad ku arki kartaa sida ay u awoodaan inay kula xiriiraan iyaga.
Maalinta ilaa maalinta Don Gato Wuxuu aad u jeclaa qorraxda, seexashada mana jeclayn inuu bannaanka u baxo. In kasta oo ay leeyihiin alaabo badan oo lagu ciyaaro, xoqitaanno, iwm. waxa caadiga ah waa inuu had iyo jeer u dhawaa Auronplay, ama agtiisa ama dushiisa, calaamad u ah kalgacalka uu lahaa.
Waxaa jira daqiiqado badan oo qosol ah oo u dhexeeya Don Gato iyo Auronplay. Wuxuu had iyo jeer ka mid ahaa fiidiyowyada, xitaa isaga oo aan rabin, tan iyo markii uu awood u yeeshay inuu galo iyaga oo aan xitaa lagu casuumin, laakiin u jihaystay kuwa raacsan, ee u yimid inay u arkaan inuu yahay jilaa kale oo waydiiyey markay arkeen.
Nasiib darro, iyo in kasta oo xaqiiqda ah in Don Gato aanu ahayn "duug" da 'weyn, maaddaama uu jiray 8 sano oo keliya, xanuun ayaa sababay in la dhigo isbitaalka xoolaha ee Andorra iyo, ugu dambayntii, kama adkaan karin sawirka culeyska.
Waxaan udiyaarineynaa dhamaan dhiira galintooda Auronplay waqti adag oo murugo leh sida tan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadaha Caanka Ah » Kumaa ahaa Don Gato, xayawaanka aaminka ah ee Auronplay